Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Jarmalka ayaa dhigay rikoor cusub oo ah Gawaarida Korontada
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • kirada baabuurka • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Wakhtiga waarta • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Jarmalka ayaa dhigay rikoor cusub oo ah Gawaarida Korontada.
Boqolkiiba Baabuurta Korontada ee baabuurta Jarmalku dhawaan ka diwaangashanayd waxay marayaan heerkii ugu sarreeyey abid, iyaga oo ka hor imanaya carqaladaynta warshadaha baabuurta.
Bishii Oktoobar, markii ugu horreysay, baabuurta korontadu waxay ku xisaabtameen 30.4 boqolkiiba diiwaangelinta baabuurta cusub ee Jarmalka.
Xadka faa'iidada ee baabuurta korantada ayaa hadda ah mid aad u sareysa, sababtoo ah dawladda Jarmalku waxay ku kabtaa iibsashada EVs ilaa 6000 EUR.
Ganacsatadu waxay bixiyaan lacag celin 3000 oo Yuuro ah, taasoo ka dhigaysa dadka wax iibsanaya inay u maleeyaan inay tahay wakhtiga saxda ah ee gaadhiga la iibsanayo.
Iyadoo iibka baabuurta caadiga ah ay la soo deristay sahay yaraan iyo wakhtiyo dheer oo keenista, EVs ayaa ka baxaya dukaamada Jarmalka. The Ururka Jarmalka ee Warshadaha Baabuurta (VDA) ayaa sheegay in bisha Oktoobar, markii ugu horeysay. gawaarida korantada ayaa lagu qiyaasaa boqolkiiba 30.4 diiwaan gelinta baabuurta cusub. Taas waxaa sabab u ah dhaqdhaqaaqa suuqa ee hadda jira.
"Sharaxaadku waa mid fudud," ayuu yidhi khabiirka ganacsiga iyo maalgashiga Jarmalka Stefan Di Bitonto. "Gawaadhida ayaa go'aamiya nooca baabuurta ay u qoondeeyaan qaybo sida semiconductors. Faa'iidada ayaa u dhiganta gawaarida korantada ayaa hadda aad u sarreeya. Taasi waa sababta oo ah dawladda Jarmalku waxay ku kabtaa iibsashada EVs ilaa 6000 EUR. Intaa waxaa dheer ganacsatadu waxay bixiyaan EUR 3000 rebate ah, taas oo ka dhigaysa iibsadayaasha inay u maleeyaan in hadda la joogo waqtigii saxda ahaa ee lagu iibsan lahaa baabuur. Markaa waxay macno samaynaysaa in la geliyo semiconductors gudaha EVs. Qof kasta oo ku xeeran waa faa'iido."
Tirooyinka ayaa sidaas ku cad. 178,700 baabuur wadar ahaan ayaa laga diiwaan galiyay Jarmalka bishii Oktoobar, hoos u dhac bishiiba ah 35 boqolkiiba. Waxaa jiray 54,400 cusub oo isdiiwaangelin ah EV, koror ah 13 boqolkiiba. Iyo diiwaan gelinta baabuurta batteriga kaliya lagu kaxeeyo (BEVs) ee ka soo horjeeda isku-dhafka isku-dhafka ah (PHEVs) ayaa kor u kacay boqolkiiba 32 bishii. Waa isbeddel u muuqda mid la hubo inuu sii socon doono muddada gaaban.
"Tusaalaha Shiinaha iyo Norway, iyo sidoo kale Maraykanka ilaa Tesla, waxay soo jeedinayaan in haddii kharashka iibka dawladu uu sii socdo heerkan, iibka iyo tirooyinka diiwaangelinta EVs way kobci doonaan," ayuu yidhi Di Bitonto. "Qeybtan ka mid ah suuqa baabuurta ayaa aad ugu adkeysanaya sahayda yaraanta sababtoo ah kuwa baabuurta sameeya waxay sii wadi doonaan isticmaalka qaybaha ay leeyihiin si ay u dhistaan ​​baabuurta ugu faa'iidada badan."
Tirooyinka bilaha ah ayaa ku soo aadaya iyadoo uu jiro qarax guud oo caan ka ah EV-yada Jarmalka. Gawaarida korontada diiwaangelin in ka badan saddex jibaarmay, laga bilaabo 63,281 ilaa 194,163, laga bilaabo 2019 ilaa 2020, sida ay sheegtay wakaaladda dawladda Jarmalka ee KBA. Iyo 115,296 EVs ayaa la diiwangeliyay Janaayo ilaa Maajo ee sanadkan oo keliya.
"Sidoo kale waxay si cad u tahay kiiska in aqbalaadda EVs ee Jarmalka ay sii kordheyso," Di Bitonto ayaa ku daray. "Waa isbeddel is xoojinaya. Dadku hadda waxay iibsanayaan EV-yada sababtoo ah faa'iido ayay leedahay in sidaas la sameeyo, laakiin kororka tirada EV-yada waddooyinka ayaa hubaal ah inay kor u qaadi doonto caannimadooda iyadoon loo eegin yaraanta hadda jirta."